Nur Aysan: Biography of actress
Ukuthandwa bawela actress Turkish Nur Aysan ngemva kokukhululwa kwe-uchungechunge sethelevishini "Century Ezinhle Kakhulu ', lapho yena udlala umfazi wesithathu Sultan Suleiman - Mahidevran Sultan. Lokhu indima yafuna actress umaluju ephelele kanye nenguquko, ngoba esikrinini ngokuvamile has ukudlala ladies nge uhlamvu kuyinkimbinkimbi futhi bitchy. Namuhla, Nur Aysan, ogama biography ugcwele liqhakazile, kodwa ngaso sonke isikhathi esihle izinto - actress eziholayo cinema-Turkish.
Nur Aysan (nee - Fettahoglu) wazalelwa 12 Novemba 1980 e-Germany. Uneziqu eziningi bazalwane, ngakho njengoba ingane kwadingeka miss akusiyo. Noor Wayefisa ukuba umdlali waseshashalazini awusekho professional, kodwa wafika uyise wayo, zihlukaniswa despotism, akambonanga indodakazi yakhe lo msebenzi, futhi isifiso sakhe zemikhaya evelele ukuze kushwelezwe hhayi wayefuna. Le nkinga liye laba nethonya elinamandla Nur Aysan. Biography of actress ngabe akubanga njena ngokuphelele uma bekungenjalo sengqondo sikayise ubungcweti.
Yingakho, ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme e-Turkey Aysan baya emzini we-Golden Horn futhi langena eyunivesithi yendawo ku wezifundo design. Le ntombazane yayingazi ukuthi ufuna incike kubazali, ngakho waqala ukubheka imisebenzi njengoba ngelinye ilanga isisebenzi sasebhange. Ngemva kwesikhathi esithile, Nur isibe umethuli TV ku ukudluliselwa ezomnotho.
Aysan ibinesithakazelo kwamabhange kanye umnotho njalo, kodwa akukaze kwakuthuthukisa ukuba nokwenzeka esikhathini esizayo ukuvula inkampani design ukuthi bahlanganyele zokubhukuda kuqondane and ukudala ama-movie ne-TV. Emkhakheni wezezimali, ngokuvumelana actress, ezingalindelekile kakhulu, ukusebenza ngakho kulo Nour hhayi kakhulu unxanele.
Ngo-2008, nur fettahoğlu baba Nur Aysan, actress biography wathatha elinye ithuba - washada wamasheya Murat Aysan. umyeni okusha aphakanyisiwe Nur ukuba umdlali waseshashalazini awusekho, futhi wanquma ukuzama yena ngendlela entsha. Kakade lokuqala chungechunge yayo, "Yimuphi ubaba" futhi «gonul Salincagi» amehlo izilaleli ukuba debutante. Nur Aysan, biography, izithombe kanye ukuphila kwazo siqu bebelokhu ngeso elibukhali, kunalokho ngomoya ophansi asabela ngayo ukuthandwa agubhayo kwalo.
Ngo-2008, izikrini out ochungechungeni TV "Uthando Forbidden", lapho Aysan edlalwa bhanqa nebahat çehre, uzakwabo azayo uchungechunge sethelevishini "Ezinhle Century", lapho kwaba ngo-2010. Iqhaza Mahidevran Sultan, unina Şehzade Mustafa, Nur Aysan, ogama biography manje yibo bonke abathandi cinema-Turkish, lithole sibonga idumela layo ngemva "uthando esenqatshelwe".
Ngemva izikrini yochungechunge lokuqala "Ezinhle Century" actress uthathwa uthando abantu, abalandeli yochungechunge uthande UNoor ku-inthanethi inthanethi uchungechunge abazinikezele, izingxabano kokuba njalo ngokuthi ubani umfazi best of Sultan Suleiman - Mahidevran ngu Nur Aysan noma Hjurrem ngu Meryem Uzerli (4 zonyaka - Vahid Perchina).
Ngo-2011, Nur odlale i sezombusazwe asebenzayo ifilimu "Valley of Izimpisi: Palestine", uvele ngaphambi izilaleli ukubukeka entsha ngokuphelele. Ngo-2012 Aysan wehlukana nomyeni wakhe futhi wabuyela igama lakhe sasekhaya - Fettahoglu. Isehlukaniso kwakulandelwa esibandakanya abezindaba, Nokho Nur waqhubeka esebenza on the show, naphezu kwazo zonke nezinkinga zokuphila.
Manje Nur fettahoğlu emshadweni usomabhizinisi Turkish Levent Viziroglu. Ngemva ukuqopha e "Ezinhle Century" actress uhlela ukuhamba ku sokubeletha. Nakuba engakwazanga ukuwaphendula yokusabela imfundo, Nur ingenye okufunwa kakhulu abadlali eTurkey uyaqhubeka wakhe uhlale kule minyaka embalwa edlule. Biography Nur Aysan ayikapheli, futhi ngokushesha nje actress ziyojabula abalandeli bakhe kanye izindima entsha yokuqala.
Marvel Comics. Bubble: Indaba umlingisi
"Skins" uchungechunge ithelevishini okukhulu. Abalingisi kanye izindima
Paul Gross: umlingisi Canadian, umlobi yimpumelelo, umqondisi kanye umkhiqizi
Filmography Arnolda Shvartseneggera kusukela "Hercules" ukuze "Terminator" futhi eminye
Thriller Ejabulisayo ababonayo kuwufanele
"Physics noma Chemistry": nabalingisi, inguqulo Russian nenguqulo Spanish
Indlela ukususa imvukuzane
Esiqhingini Madeira, isikhumbuzo Ronaldo
Kanjani ukwakha izimbali lobuhlalu: isigaba master Wabasaqalayo
Ilambu LSP: inhloso kanye kudivayisi
Dmitry Raspopov: izincwadi. yesayensi
Kuyini laminate flooring ezindongeni elingaphakathi?
Ukwelashwa okungcono kakhulu kokuhluleka kwenhliziyo
Ukufaneleka isisindo ukulahleka ekhaya. singakufinyelela uhlobo Imiphumela ukuyenza?
An uhambo ezithakazelisayo guided Rubtsovsk
Inyama yenkomo sikadali nge asithena - iresiphi
Kuphi futhi kanjani le ntaba-mlilo kwakhiwa? Njengoba kwakhiwa ukuqhuma kwentaba-mlilo ibizwa?